2016ပြီလ 20 | 90 ၏စာမျက်နှာ 2020 | NAB သတင်းများ | XNUMX NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2016 » ဧပြီလ (စာမျက်နှာ 20)
Linear Acoustic ® 2000 NAB Show တွင် Aero.2016 ™ Audio / Loudness Manager အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းများကိုကြေငြာခဲ့သည်။
Las Vegas, ဧပြီ 20, 2016 - Linear Acoustic®အဆိုပါ 2000 NAB ပြရန် (Booth SU2016) မှာ၎င်း၏ AERO.11921TM ပေး Audio / အသံကျယ် Manager ကိုများအတွက် updates များကိုကြေညာသည်။ နယူးထုတ်ကုန်ပထမဦးဆုံးမိတ်ဆက်ခဲ့သည်ကတည်းကတစ်ခုတည်း AERO.5 အတွက်ဥပမာအားဖြင့်တစ်ဦးလျှင်ငါးစတီရီယိုအသံကျယ်မန်နေဂျာ (2 +2+2+2+ 2) ကိုထောက်ပံ့ပေးသော AMX2x2000 processing ဥပမာထို option ဖြစ်ပါတယ်။ AERO.2000 AES နှင့် HD ကို / SD က-SDI ၏တဆယ်ခြောက်လိုင်းများလည်းပါဝင်သည် ...
Las Vegas, ဧပြီ 20, 2016 - Linear Acoustic အဆိုပါ 10 NAB ပြရန် (Booth SU2016) မှာ၎င်း၏ AERO.11921 DTV အသံပရိုများအတွက် updates များကိုကြေညာသည်။ AERO.10 တစ်ခုလုံးကို Aero ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးမှာတွေ့ရှိတူညီတဲ့အရည်အသွေးမြင့်အပြောင်းအလဲနဲ့ကိုထောက်ပံ့ပေးပေမယ့်တစ်ဦးသိသိသာသာနိမ့်သောစျေးနှုန်းမှာ။ နယူးထုတ်ကုန်ပထမဦးဆုံး IBC 2015 မှာမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ကတည်းကများအတွက် option တစ်ခုဖြစ်သည် ...
NAB မှာ Cantemo Portal ကိုအတွက် Adobe ကနိဒါနျး CC ကိုများအတွက် Mediasmiths မိတ်ဆက်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်း Panel ကို
Las Vegas မှ, 20th ဧပြီလ 2016 - Mediasmiths NAB မှာAdobe®Prelude® CC ကိုများအတွက်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်း panel ကိုဖွင့်သည်။ အဆိုပါ panel ကို Adobe ကနိဒါနျး CC ကိုအတွင်းကနေအသုံးပြုသူများအ Cantemo Portal ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးချောမွေ့နှင့်မြန်မီဒီယာပြန်လည်သုံးသပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်သေချာ။ Cantemo Portal ကိုတစ်ဦး, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မော်ဂျူလာနှင့်အရွယ်မှာမီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ panel ကိုအတူ, Mediasmiths အကြားတံတားပေးပါသည် ...
#NABShow: 2016 NAB Show မှာနေ့သုံး
နေ့ THREE နှင့် 2016 NAB ပြရန်၏နောက်ဆုံးကြီးတွေအပြည့်အဝနေ့က !!! ဒါဟာသင်ပြန်ရှိသည်ဖို့ GREAT င် - ယနေ့ဤမျှလောက်နောက်ထပ်ရှိမယ့် !!! ကျွန်ုပ်တို့၏တိုက်ရိုက်ဘလော့သတင်းအချက်အလက်များနှင့်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာငါတို့အမျိုးမျိုးသောသမားတွေ၏ "မှတ်တိုင်များ" အထဲကအတော်များများ post ဆက်လက်! မေ့လျော့မနေပါနဲ့ - သင် #NABShow nabshow.com သို့မဟုတ် broadcastbeat.com 9am မှာအွန်လိုင်း LIVE ဖမ်းနိုင်ပါတယ် ...
VINTEN NAB 2016 ကို AT သစ်ဆဋ္ဌဂံ TRACK SYSTEM ထုတ်ဖော်ပြသ
Vinten, စက်ရုပ်ကင်မရာထောက်ခံမှုစနစ်များအတွက်ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး Vitec Videocom အမှတ်တံဆိပ်သည်ဆဋ္ဌဂံ System ကိုမိတ်ဆက်ဖို့ဂုဏ်ယူဖြစ်ပါသည် - ပုဒ် Las Vegas မှာ, နီဗားဒါး (ဧပြီ 19, 2016) တခုတခုအပေါ်မှာအဆင့်မြင့်စက်ရုပ် Dolly စနစ် Tecnopoint ရလဒ်များကိုနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။ အဆိုပါစနစ်အပြည့်အဝ Tecnopoint အတူ Vinten ထိန်းချုပ်ရေးစနစ် (VRC) ကိုပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးသည်အတူတကွဆောင်တတ်၏ ...
Pixels တည်နေရာအကြား: Marietta GA အမေရိကန်ကို Adobe အကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက်။ ဗီဒီယိုကိုဂရပ်ဖစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ သငျသညျ ... သက်ဆိုင်ရာနေဖို့ဗီဒီယိုနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများအစဉ်အဆက်-ပြောင်းလဲနေတဲ့ကမ္ဘာကြီးလက်ခံ, _technically savvy_ ဖြစ်ကြသည်။ more >>
High School တွင်သတင်းစာပညာ / Audio-Video ထုတ်လုပ်မှုပညာရေးအဖွဲ့အစည်းမှ
တည်နေရာ: Towanda KS အမေရိကန်အဆိုပါစာသင်ခန်း State-Of-The-Art ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူဗွီဒီယိုတစ်ခုစတူဒီယိုတို့ပါဝင်သည်။ အဆိုပါအနေအထားပို ... သတင်းစာပညာ, ဓာတ်ပုံပညာနဲ့ audio ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုသင်တန်းများဆုံးမဩဝါဒပေးပါဝင်သည် >>
EditShare Flow မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းနယူးအဝေးမှတည်းဖြတ် Tools များဂုဏ်ယူနှင့် NAB4မှာအဆင့်မြင့် 2016K ပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူ Multisite ထုတ်လုပ်မှုစှမျး
Enhanced web-based ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု tools များနှင့်အသစ် Flow ပုံပြင်ဝေးလံခေါင်သီအယ်ဒီတာဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာထံမှမီဒီယာမှလုံခြုံ access ကိုနှင့်အတူအစာရှောင်ခြင်း proxy ကိုတည်းဖြတ်ပူဇော်; Apple က ProRes နှင့် Avid proxy ကိုတည်းဖြတ် Workflows များအတွက်နယူးထောက်ခံမှု။ EditShare, အသိဉာဏ် shared သိုလှောင်မှုနှင့်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်အတွက်နည်းပညာခေါင်းဆောင်ဘယ်လောက် EditShare Flow, သူ့ရဲ့ flagship မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှု၏နောက်ဆုံးဖြန့်ချိပြသတာဖြစ်ပါတယ် ...
20 ၏စာမျက်နှာ 90«ပထမဦးစွာ...10«1819202122 » 304050...နောက်ဆုံး»